Endrik'io pejy io tamin'ny 9 Jiona 2019 à 12:31
166 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 5 Mey 2019 à 12:04 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 9 Jiona 2019 à 12:31 (hanova) (esory)
Andro faharoa ny andro [[Zoma]]. Ny teny hoe ''Zoma'' na ''Azoma'' na ''Joma'' dia avy amin'ny teny arabo hoe الجمعة / ''al-jum‘ah'' izay midika hoe "andro fahenina". AndroAmin'ny ankapobeny dia ndro mainty ny Zoma, araka ny finoan'ny Ntaolo malagasy, ka natokana handevenana.
Andro fahatelo ny andro [[Asabotsy]]. Ny teny hoe ''Asabotsy'' na ''Sabotsy'' dia avy amin'ny teny arabo hoe السبت / ''as-sabt'' izay avy amin'ny teny hebreo hoe שָׁבַת / ''shabbat'' na avy amin'ny teny hebreo hoe ''shabbos'' izay samy manondro ny andro Asabotsy sady midika hoe "andro fitsaharana" na "andro fialan-tsasatra". AndroAmin'ny ankapobeny dia andro "mibontsina" ny Asabotsy, araka ny fivoasana sy ny finoan-drazana malagasy, ka natokana hitomaniana sy hamoizana ny maty.
Andro fahefatra ny [[Alahady]]. Ny teny hoe ''Alahady na Lahady'' dia avy amin'ny teny arabo hoe الأحد / ''al-aḥad'' izay midika hoe "andro voalohany". AndroAmin'ny ankapobeny dia andro mahery ny Alahady, raka ny finoan'ny [[Ntaolo]] malagasy, ka tsy azo andevenana ny marainany.
Andro fahadimy ny [[Alatsinainy]]. Ny teny hoe ''Alatsinainy'' na ''Latsinainy'' na ''Tinainy'' dia avy amin'ny teny arabo hoe الإثنين / ''al-ithnayn'' izay mitovy dika aminy. AndroAmin'ny ankapobeny dia andro mafy sy mainty ny Alatsinainy, araka ny finoan-drazana malagasy. Tsy fisantaran-javatra io andro io fa andro fandevenana. Amin'ny maha andro mafy azy dia andro fanamafisan-javatra sy fandevenana ny Alatsinainy.
Andro fahenina ny [[Talata]]. Ny teny malagasy hoe ''Talata'' na ''Atalata'' dia avy amin'ny teny arabo hoe الثلاثاء / ''ath-thulathā’.'' AminAminny ankapobeny, amin'ny faritra maro eto Madagasikara dia tsy mety ny mamangy mana-manjo amin'ny andro Talata, araka ny finoan'ny Ntaolo malagasy. Andro tsara hivoahan'ny [[andriana]] na ny tafika ny andro Talata. Ataon'ny Ntaolo malagasy hoe " Talata gorobaka" ny andro Talata.
Andro fahafito ny andro [[Alarobia]]. Ny teny malagasy hoe ''Alarobia'' na ''Larobia'' dia avy amin'ny teny arabo hoe الأربعاء / ''al-’arbi‘ā’'' izay midika hoe "andro fahefatra". Amin'ny ankapobeny, amin'ny Ntaolo malagasmalaga
sy dia andro ratsy ny Alarobia, araka ny fitenenana hoe "Alarobia tsy miverina". Natokana ho an'ny famoizana sy ny fandevenana ny Alarobia.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/971252"